ILevitikus 27 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
2 ThethaThetha koonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Xa athe umntu wenza isibhambathiso esibalulekileyo, imiphefumloimiphefumlo yoba yekaYehova ngokulinganisela kwakho.
3 Ke, ukulinganisela kwakho, oyindoda makuthabathele kominyaka imashumi mabini ezelweezelwe, kuse kominyaka imashumi mathandathu ezelweezelwe: ukulinganisela kwakho makube ziishekele zesilivere ezimashumi mahlanu zengcwele.
7 Ukuba kuthabathele kominyaka imashumi mathandathu ezelweezelwe kwenyusa, ukuba uyindoda, ukulinganisela kwakho makube ziishekele ezilishumi elinesihlanu; oyinkazana, makube ziishekele ezishumi-nye.
8 Ke ukuba uthe wanzonza kunokulinganisela kwakho, makamiswe phambi kombingeleli, umbingeleli amlinganisele; ngento esinokuyifumana isandlaisandla salowo ubhambathisileyo, umbingeleli amlinganisele.
9 Ukuba yinkomo leyo, kusondezwa yona ukuba ibe ngumsondezo kuYehova, yonke into enjalo enikelwa kuYehova mayibe ngcwelengcwele.
10 Ize ingaguqulwa, ize ingananwa, elungileyo ngembi, embi ngelungileyo; ukuba utheuthe wanana ukwanana oku inkomo ngenkomo, mayibe ngcwelengcwele yona, kwanaleyo kwananwe ngayo.
14 Xa athe umntu wayingcwalisa indluindlu yakhe ukuba ibe ngcwelengcwele kuYehova, umbingeleli makayilinganisele, abethe phakathi kwelungileyo nembi njengoko umbingeleli ayilinganiseleyo, yoqiniseka ngokunjalo.
15 Ukuba lowo wayingcwalisayo uthe wayikhulula ngentlawulelo indluindlu yakhe, makongeze isahlulo sesihlanu sesilivere yokulinganisela kwakho kuko oko, ibe yeyakhe.
17 Ukuba uthe wayingcwalisa intsimiintsimi yakhe, ethabathe emnyakeni wentlokoma, mayiqiniseke ngokulinganisela kwakho.
18 Ukuba uthe wayingcwalisa intsimiintsimi yakhe emvaemva kowentlokoma, umbingeleli makambalele imaliimali ngokweminyaka esaseleyo, kuse emnyakeni wentlokoma, iphungulwe kweyokulinganisela kwakho.
19 Ukuba lowo wayingcwalisayo uthe wayikhulula okunene ngentlawulelo intsimiintsimi, makongeze isahlulo sesihlanu semali yokulinganisela kwakho kuko oko, iqiniseke kuye.
20 Ukuba uthe akayikhulula ngentlawulelo intsimiintsimi, nokuba uthe wathengisa ngentsimi leyo komnye umntu, mayingabi sakhululwa ngentlawulelo.
21 Loo ntsimi yoba ngcwelengcwele kuYehova, ekuphumeni kwayo kuloo mntu ngomnyaka wentlokoma, njengentsimi eyahlulelwe ukuba ibe lilifa lombingeleli.
22 Ukuba uthe wangcwaliswa kuYehova intsimiintsimi yentengo yakhe, ingentsimi yelifa lakhe,
24 Ngomnyaka wentlokoma intsimiintsimi mayibuyele kulowo yathengwa kuye, kulowo belilelakhe ilifa lomhlaba.
25 Konke ukulinganisela kwakho makube ngeshekele yengcwele; ishekeleishekele yoba ziigera ezimashumi mabini.
30 Sonke isishumiisishumi somhlaba, sembewu yomhlaba, seziqhamo zomthi, sesikaYehova; singcwele kuYehova.
31 Ukuba uthe umntu wasikhulula okunene ngentlawulelo isishumiisishumi sakhe, makongeze kuso isahlulo sesihlanu saso.
32 Sonke isishumiisishumi seenkomo, nasempahleni emfutshane, yonke into ethubeleza phantsiphantsi kwentonga, eyeshumi mayibe ngcwelengcwele kuYehova.
33 Makangagocagoci phakathi kwelungileyo nembi, angayanani; ukuba uthe wayanana ukuyanana oku, mayibe ngcwelengcwele yona, naleyo kwananwe ngayo mayingakhululwa ngentlawulelo.